King of Future – Built with SitePad
No 119(A), Dana Aung Lane, Near Pawsanhmwe Road, Min Din Bus Stop, Thuwunna, Thingangyun Township,Yangon.
you are winner, our investment partner
King of Future Company ကို ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကုမ္ပဏီမှတ်ပွုံတင်အမှတ် ၁၆၄၉ ဖြင့် တရားဝင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး Forex Trading နှင့်ပတ်သတ်သည့် သင်တန်းများပေးခြင်း၊ Signal များပေးခြင်း၊ အကောင့်များဖွင့်လှစ်ခြင်း စသည်တို့ကိုလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း မကြာမီရောက်ရှိလာတော့မည့် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးအတွင်းရှိ materials များ၊ ငွေကြေးများ၊ စတော့များ စသည်တို့အတွက် အသင့်ရှိနေပါသည်။
တစ်ပတ်လျှင် ၂၄ နာရီ ၅ ရက်ပတ်လုံး client များအတွက် အမြဲဂရုစိုက်နိုင်ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိခြင်း
အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ Forex စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် Forex သင်ခန်းစာများကို သင်တန်းအမျိုးစားပေါင်းများစွာဖြင့် သင်ကြားပေးခြင်း
ဝါရင့် ဈေးကွက်စိစစ်သူများမှ အကျိုးအမြတ်ရနိုင်ချေများသော Signal များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း၊ သတင်းများအား မျက်ခြည်မပြတ်စေရန်စောင့်ကြည့် ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း
Deposit လုပ်ခြင်းနှင့် Withdraw လုပ်ခြင်းတို့လွယ်ကူမြန်ဆန်မှုရှိခြင်း
USGFX’s Liquidity Providers
Forex Trading သည် ငွေကြေးတစ်ခုမှ အခြားငွေကြေးတစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည့် Exchange တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
အခြားသောငွေကြေးဈေးကွက်များနှင့်မတူဘဲ Exchange ကို အကန့်အသတ်မရှိနေရာတိုင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ trade ခြင်းကို ဘဏ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များအကြားချိတ်ဆက်ထားသည့် အွန်လိုင်းကွန်ရက်မှ တစ်ဆင့်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး Forex တွင် ငွေကြေးတစ်ခုအား တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပင် ရောင်းချခြင်းများ၊ ဝယ်ယုခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပေသည်။ Forex Margin Trading သည် နေ့စဉ် Forex ဈေးကွက်တွင် ကုန်သွယ်နေကြသည့် ဒေါ်လာပေါင်း ၅ ထရီလီယံ တန်ဖိုးများအပေါ်တွင် ပျော်ဝင်နိုင်လွယ်သည့် လှုပ်ရှားမှုအရှိဆုံး financial product တစ်ခုဖြစ်သည်။
Trading ပိုင်းအားကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီး အကျိုးအမြတ်ရရှိနိုင်မည့် နည်းဗျူဟာများကို သိရှိထားသူ signal များကိုထုတ်နိုင်သူများအနေနှင့် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး မိမိ ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မူတည်ပြီး အကန့်အသတ်မဲ့လစာခံစားခွင့်ရှိပါသည်။ career@kingoffuture.net သို့ မိမိ CV ကို email ပို့ပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
စကားအပြောအဆိုကောင်းမွန်ပြီး အလုပ်ကိုတကယ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်လိုသူတိုင်း လျှောက်ထားနိုင်ပြီး အတွေ့အကြုံမလိုအပ်ပါ။ career@kingoffuture.net သို့ မိမိ CV ကို email ပို့ပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Our Partner USGFX
King of Future ၏ မိတ်ဘက် Company သည် USGFX ဖြစ်ပြီး သြစတေးလျ၊ Forex နှင့် CFD ငွေကြေးတွင် ဦးဆောင်နေသည့် USGFX သည် ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ client များကို ငွေကြေးအတွဲများ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် stock များကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် လုံခြုံစွာ trade လုပ်နိုင်စေရန်အတွက် trading အတွေ့အကြုံရှိ ပညာရှင်ကြီးများနှင့် လူသိအများဆုံးဂုဏ်သတင်းကျော်ဇောမှုများနှင့်တကွ ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ USGFX သည် ကမ္ဘာတစ်လွှားတွင် ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်ထားပြီး client များ၏လိုအပ်ချက်များအတွက် ၂၄ နာရီပတ်လုံး အထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါသည်။ USGFX သည် နိုင်ငံပေါင်း ၃ဝ ကျော်တွင် သေချာသီးသန့်စီစဉ်ထားသော trading solution များအား စီစဉ်ပေးထားပါသည်။
Get it on Your Desktop
When you trade with USGFX you trade with the world’s most trusted and reliable trading platform –
We are pleased to offer our client’s free access to the world’s most popular trading platform, MT4! Simply download the USGFX MT4 FX platform and trade on the go from anywhere in Myanmar and the world. It’s that simple!
KOF provides commodity & currency trading advice ,
gold & currency and stock training class as well as 24/7 advisory to Forex traders.
Our Partner is USGFX and it ‘samulti-award winning, multi-asset Australian FX & CFD broker, enabling clients worldwide to trade currency pairs, indices and commodities in premium trading conditions.
Developed by Auro Karshine